दशैंका के खाने, कसरी खाने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ दशैंका के खाने, कसरी खाने ?
दशैंका के खाने, कसरी खाने ?
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ असोज २० गते, १९:०३ मा प्रकाशित
हामी नेपालीहरु चाडबाडमा विशेष गरी रमाइलो साथसाथै खानपिनमा विशेष ध्यानदिने गर्दछौं । हामीहरु अधिकांशको निम्ति चाडपर्व माछा मासु खाने अवसर बनेर आउने गर्दछ । पहिलेको स्थितीभन्दा केहि फरक भएतापनि हालसम्म पनि सहरको तुलनामा गाउँका मानिसहरु मासु खानकै निम्ती चाडपर्व कुरेर बस्ने गरेको पाइन्छ ।
अधिकांश ब्यक्तिहरुले यस समयमा खानपिन र रमाइलोलाई मात्रै बढी फोकस गर्ने हुँदा विभिन्न चिल्लो एवम् मसालायुक्त खानाहरु खाने गर्दछन् । जसबाट उनीहरुको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्ने हुन्छ । स्वस्थ बिना कुनै पनि चाडपर्व तथा समारोहमा आफूले चाहे बमोजिम रमाइलो गर्न नसकिने वा असम्भव प्राय नै हुने गर्दछ । तसर्थ हामीले दशैं तिहारजस्ता चाडपर्वमा खानपिन र रमाइलो सँगसँगै स्वास्थ्यमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
दशैंमा हामीले उचित ख्याल तथा रेखदेख गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ बढी खानाको कारण हामीलाई अपच भएर शरीरमा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्ने हुन्छ । अझ दशैंमा आफन्तहरुकोमा टिका लगाउन जाने र गएको ठाउँमा केही न केही खानुपर्ने बाध्यताका कारण पनि यस समयमा अधिकांशलाई अपच भएर ग्यास्ट्रिक, झाडा बान्ता, तथा पेट दुख्नेजस्ता समस्याहरु देखा पर्न सक्छ । तसर्थ शरीरमा यस्ता समस्या देखा नपरोस् भनी स्वस्थ्यकर दशैं मनाउनका लागि हामीले निम्न उपायहरु अपनाउन सक्छौं ।
आफ्नो इच्छा अनुसार भन्दा पनि शरीरको प्रकृतिअनुसार मासुको प्रयोग गर्ने
हाम्रो शरीरले सधै खाने गरेको खाना पचाउने बानी परी सकेको हुँदा एकैचोटी खाना खादा अपच हुने हुन्छ । यसबाट कालान्तरमा कोलेस्टोजस्ता समस्याहरु देखा पर्ने हुन्छ । तसर्थ शरीरलाई आवश्यक रउचित मात्रामामा त्रै खाना खाने
एकै पटकमा नखाई थोरै थोरै गरेर पटक पटकमा खाने
तराई तिरको खसी मोटो हुने भएकाले त्यस्तो मासुमा बढी बोसो पाइने गर्दछ । तसर्थ सकेसम्म पातलो खसी वा पहाडे खसीको मासुको प्रयोग गर्ने
दशैंमा मासु सँगसँगै मादक पदार्थको पनि व्यापक प्रयोग हुने हुन्छ । यी दुवै शरीरको लागि हानिकारक भएकोले सकभर प्रयोग गर्दै नगर्ने
सकिन्छ भने ‘एअर फ्रायर’ मा पकाएको मासु खाने (यसमा चिल्लो कम हाली पकाउन सकिन्छ)
सकभर कम चिल्लो तथा मसाला हालेको खाना प्रयोग गर्ने
मासुमा बोसो हुने हुँदा आवश्यक तेल बोसोबाट नै आपूर्ति हुने हुन्छ । त्यसैले खाना बनाउदा सकभर कम तेल प्रयोग गर्ने
स्वस्थकर परीकार जस्तै उसिनेको, रस हालेको मासुको परिकार बनाएर खाने गर्ने
र, ताजा तथा स्वास्थ्यवद्र्धक मासु मात्रै खाने बानी बसाल्ने ।
तर, कतिपय अवस्थमा माथि उल्लेख गरेजस्तै उचित स्याहार तथा सुसारको बाबजुद पनि चाडपर्वको समयमा आफन्तको कर तथा सम्मान राख्नकै लागि भएपनि खानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो नेपाली समाजमा मासुद्धारा नै सत्कार गर्ने चलन रहेको हुदा त्यस्ता खानाहरु थोरै थोरै गरेर खादापनि धेरै हुन पुगी अपच हुने हुन्छ । त्यस्ता समस्या समाधानका लागि हामीले निम्न उपायहरु अपनाउन सक्छौ :
कम्तिमा पनि दैनिक आधा घण्टा हिड्ने
साइकल चलाउँदा पनि शरीरमा खाना पचाउन सहज हुने हुन्छ
शारीरिक श्रम तथा व्यायामहरुले शरीरको खानापचाउन मद्दत गर्ने भएकोले पसिनाआउने गरी दैनिक एकपटक शारीरिक व्यायाम गर्ने
मुला, काँक्रो, गाँजर जस्ता सलादहरु प्रयोग गर्ने
माछा मासु सँगसँगै मौसमी तरकारी तथा फलफूललाई पनि विशेष प्राथमिकता दिने
र, पानी अत्याधिक मात्रामा पिउने ।
सुकाएर राखेको मासु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक
परम्परादेखि चलिआएको चालचलनको बाबजुद पनि चाडपर्वमा विशेषगरि खानपिनमा नै बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ । र, त्यसमा पनि नेपाली समाजमा मासु बिना कुनै पनि चाडपर्व असम्भव नै देखिन्छ । अझ दशैंजस्ता ठूला चाडबाडमा प्रत्येकको घर घरमा खसी बोका काटिने हुँदा उनीहरुको निम्ति दशैं मासुको पर्व नै हुने गर्दछ । उक्त काटिएको मासु एकै पटकमा खाइ नसकिने हुँदा प्रायजसोः गाउँघरतिर बाँकी रहेको मासुु झुण्डाएर सुकाएर राखी पछि-पछिसम्म सोही मासु प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । गाउँघरमा अधिकांशको घरमा धुवाँ तथा घाममा खुल्ला राखेर मासु सुकाउने गरिन्छ ।
हालसम्म गाउँघरतिर अझैपनि अधिकांशले यसरी मासु प्रयोग गर्ने गर्दछन् । मासु अन्यको तुलनामा छिटो बिग्रिने हुन्छ । तर, कमैले मात्र यसले निम्त्याउने नकरात्मक असरको बारेमा ख्याल गरेका हुन्छन् । मासु र यसमा पाइने चिल्लोमा कुनै पनि किटाणु पैदा हुनर फैलिनको निम्ति एकदमै अनुकूल माध्यम हुने भएको कारण अन्य खाना तथा खाद्यवस्तुको तुलनामा मासुमा छिटो किटाणुहरुको वृद्धि तथा विकास हुने हुन्छ ।
जसकारण यस्तो मासुको प्रयोग स्वास्थ्यको दृण्टिकोणले पनि अस्वस्थ्यकर मानिन्छ । यस्तो मासुको प्रयोगका कारण फुड पोइजन हुने सम्भावना अत्याधिक मात्रामा रहन्छ । त्यसैले दशैं होस् वा अन्य समयमा सुकाएर राखेको मासुको प्रयोग गर्नै हुदैन । यसका लागि हामीले दशैंमा एकैपटकमा सिंगो खसी नकाटी थोरै थोरै मात्रामा आवश्यकता अनुसार ताजा मासु पसलबाट किनेर ल्याउने बानी बसाल्नु पर्दछ ।